Misoro yenhau, China, Kubvumbi 21, 2022
Chirongwa chekuverengwa kwevanhu kana kuti census chotanga munyika nhasi pachitangwa nekuverengwa mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemhuri yavo.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda kuAfrica University, Dr Norman Pinduka, vaudzaa musangano wange wakarongwa neZimbabwe Democracy Institute (ZDI) kuti apo nyika yatarisana nesarudzo dza2023 pane mukana mukuru wekuti bato riri kutonga reZanu PF rinogona kukunda musarudzo idzi kunze kwekuti paita shanduko huru pamusoro pemafambisirwe anoitwa sarudzo munyika.
Air Zimbabwe yorambidzwa kubhururuka ichienda kunyika dziri mugungano reEuropean Unon ichinzi inogona kukonzera njodzi.
Vezvematongerwo enyika vozeya zvinoreva kuenda kwakaitwa nenhengo dzebato rinopikisa reCitizens’ Coalition for Change kumhemberero dzekusvitsa makore makumi mana nemaviri nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Muchirongwa chedu cheWomens Round Table na8pm nhasi chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muhupenyu hwavo, nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu kumadzimai emuZimbabwe ari kuSouth Africa iko kwaberekera ingwe sezvo paine kunetsana pakati pezvizvarwa zveZimbabwe nezvenyika iyi panyaya yemabasa nezvimwe.